Vista's Colorful Planet: ရယ်စရာ ( ၁ )
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပို့ လိုက်တဲ့မေးလ်ကနေပါလာတာ
ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းက ဗားရှင်းပြောင်းရေးထားတာမို့ လို့ အသစ်လို ပဲပြန်ရယ်နေရတယ်။
Manager က ပထမနေ.အလုပ်ဝင်လာ သော System Engineer လေး အားပြောသည်။
“ ကိုင်း အစ နေ့ အနေနဲ. ကြမ်းတိုက်ပါ “
Engineer လေး က ဒေါသ ကိုထိန်းထားရဟန် ဖြင်.ပြန်ပြောသည် ။
“ ကျွန်တော် က ဘွဲ.ရပါ MCSE ,CCNA ,Solaris, Linux အကုန်အောင်ပြီးသားပါ “
“ သြော် ဟုတ်လား။
ဒီလိုဆိုကြမ်းကိုဘယ်လိုတိုက်ရတယ် ဆိုတာ ငါပြမယ်သေသေချာချာကြည်.ထား“
“ တိန် “
ပြည်.ကျပ်နေသော MRT ပေါ် တွင်ဖြစ်သည် ။
မောင်ပုက စလုံးအဘွားကြီးကိုမေးသည် ။
“ အဘွား ကျနော်.နေရာ ထိုင်ချင်လား “
“ ထိုင်ချင်တာပေါ.ကွယ် အဘွား ခြေထောက်တွေညောင်းလှပြီကွဲ. “
“ ဒါဆိုဒီနားက မခွာနဲ. နောက် ၆ မှတ်တိုင် ဆို ရင် ကျနော်ဆင်းတော.မှာ “
မေ ။ “ မောင်ရေ ခင်တို.လက်ထပ်ပြီးရင် ခလေး ၃ ယောက် ရမှာ သိလား “
မောင် ။” ခင်ကဘာလို.တိတိကျကျပြော နိုင်တာလည်း “
မေ။ “ ပြောနိုင်တာပေါ. လောလော ဆယ် သူတို. ကျမ မေမေနဲ. နေနေကြတယ်လေ “
ကိုပေါ တယောက် ချစ်ရသူ မိန်းကလေးကိုခိုးရန်သွားသည်။
လှေကားထောင်ပြီး အပေါ်တက်ရင်းမှောင်ထဲမှမေးသည် ။
“ အချစ်လေးရေ မင်းဘယ်မှာလည်းဟေ . “
“ ကျမ ဒီမှာရှင်. တိုးတိုးပြောပါ ဖေဖေ နိုးသွား အုံးမယ် “
“ မပူပါနဲ. ချစ်ရယ် မင်းဖေဖေ က လှေကား ကိုအောက် က ကိုင်ပေးထားတယ်၊
မင်းအမေကိုပါ တပါတည်းခေါ် သွားရင် ငွေ ၁၀ သိန်းပါပေးလိုက် အုံးမှာ တဲ. “
(ဗစ် ရယ်နည်းအတိုင်း ရယ်သွားသည်)
တင်ပေးတာ ကျေးဇူးညီမလေး ...ရယ်ရတယ် :D
looking forward to more jokes! :)